Ndedzipi mhando dzenzvimbo dzaunoziva nezve vending michina? -Company Nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Ndedzipi mhando dzenzvimbo dzaunoziva nezve vending michina?
Zvino Vending muchina hakusi chete kutengesa chinwiwa uye tudyo, asi inosvika kune zvakasiyana zvigadzirwa, senge lipstick Vending muchina, ice cream Vending muchina, michero nemiriwo Vending muchina, vakuru zvigadzirwa Vending muchina etc.
Sekureva kwezvakasiyana zvigadzirwa, akasiyana marudzi e slots anosarudzwa, anosanganisira S-akaumbwa maslot, chitubu / bhanhire slots, locker kabhoni uye mamwe madiro.
Saka, ndezvipi zvakajairika vending muchina slots?
1. Chitubu zononoka
Mhando iyi yegeru ine hunhu hweyakareruka mamiriro uye akawanda marudzi ezvigadzirwa anogona kutengeswa. Inogona kutengesa zvinwiwa zvakajairika, zvinodikanwa zvezuva nezuva uye zvimwe zvinhu zvidiki, pamwe nezvinwiwa zvemumabhodhoro.
Belt slots inogona kunzi kuve kuwedzerwa kwenzvimbo dzematsutso, idzo dzine marambidzo mazhinji uye inokodzera kutengesa zvinhu zvine zvakagadziriswa kurongedza uye zvisiri nyore kudonha.
3. S-zvakaumbwa zvinotsvedza
S-zvakaumbwa nzvimbo dzakasarudzika zvakanyatsogadziriswa dhizaini yekutengesa michina. Inogona kutengesa mhando dzese dzezvinwiwa zvine mabhodhoro uye zvemumagaba. Zvinwiwa zvakarongedzwa mumatanda emukati, zvichitsvedza negiravhiti yayo, uye hazvingabatike. Iko kutengesa kunotungamirirwa ne electromagnetic mashini.
Bhokisi rega rega rine mikova yakaparadzana uye nzira dzekudzora. Uye rimwe bhokisi rinogona kuve nechinhu chimwe kana seti imwe yezvinhu.
Prev: Mutsva Muriwo uye Zvibereko Vending Machine
Zvadaro: Vending michina haigone chete kutengesa zvinhu, asiwo inodziya mwoyo yevanhu